चालू आवको ९ महीनामा युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावरले कमायो रू. २ करोड ७४ लाख नाफा | आर्थिक अभियान
चालू आवको ९ महीनामा युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावरले कमायो रू. २ करोड ७४ लाख नाफा
वैशाख २६, काठमाडौं । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. २ करोड ७४ लाख नाफा कमाएको छ। यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा भने ४८ प्रतिशत घटी हो ।
कम्पनीले सो अवधिमा रू. ५ करोड २७ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवमा कम्पनीको विद्युत् विक्री आम्दानीमा कमि आएसँगै नाफा घटेको हो । विद्युत् विक्री आम्दानी गत आवको तुलनामा चालू आवमा १९ प्रतिशतले घटेको छ ।
कम्पनीले गत आवमा विद्युत् विक्री बापत रू. २२ करोड ६३ लाख आम्दानी गरेकोमा चालू आवमा रू. १८ करोड १३ लाखमा झरेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १५ करोड रहेको छ भने चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले जगेडामा रू.१० करोड ४५ लाख सञ्चित गरेको छ ।
सो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमलव ३९, तरलता अनुपात१ दशमलव ७६ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.१०९ दशमलव शून्य ९ रहेको छ ।